Na oge dijitalụ, ụkpụrụ omume ga - aghọ ihe na - emewanyewanye etiti na - eme nyocha. Nke ahụ bụ, na ọdịnihu, anyị ga-enwe mgbagwoju anya na ihe a ga-eme na ihe ndị ọzọ na ihe a ga-eme. Ka nke a mere, ana m atụ anya na usoro nchịkwa nke ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị ga-agbaso ihe dịka ụkpụrụ ndị dabeere na isi nke isi 6. M na-atụ anya na ka ụkpụrụ omume na-etolite, ọ ga - na-eto eto dika isiokwu nke nyocha usoro. N'otu ụzọ ahụ ndị na-eme nchọpụta mmadụ na-etinye oge na ume iji mepụta ụzọ ọhụrụ ndị na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị ọnụ ala na karịa karị, m na-atụ anya na anyị ga-arụ ọrụ iji zụlite ụzọ ndị na-arụ ọrụ nke ọma. Ngbanwe a ga-eme ọ bụghị naanị n'ihi na ndị nchọpụta na-elebara ụkpụrụ omume anya dị ka njedebe, kamakwa n'ihi na ha na-elebara ụkpụrụ omume anya dịka ụzọ isi eduzi nchọpụta mmadụ.
Ihe atụ nke omume a bụ nchọpụta banyere nzuzo nzuzo (Dwork 2008) . Cheedị na, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọgwụ nwere ihe ndekọ ahụike ahụike na ndị na-eme nnyocha chọrọ ịghọta usoro dị na data ndị a. Ihe nlekota nke ndi di iche iche na-acho ihe omuma (dika ndi mmadu ndi na-ese anwuru nwere ike inwe kansa) ma na-ebelata ohere nke imuta ihe obula gbasara ihe mmadu bu. Mmepe nke algorithms ndị a na-echedo onwe ha aghọwo ebe dị nyocha; lee Dwork and Roth (2014) maka nyocha akwụkwọ ogologo oge. Ihe nzuzo dị iche iche bụ ihe atụ nke obodo nyocha ahụ na-eme ihe ịma aka dị mma, na-eme ka ọ bụrụ ọrụ nyocha, ma na-enwe ọganihu na ya. Nke a bụ ụkpụrụ m chere na anyị ga-ahụwanye na mpaghara ndị ọzọ nke nchọpụta mmadụ.
Dika ike nke ndi nyocha, otutu mgbe ha na ndi ulo oru na ndi ochichi na-acho, oganihu, o ga-esiwanye ike iji zere nsogbu ndi isi. Ọ bụ ahụmahụ m na ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta sayensị na-ele okwu ndị a anya dị ka ihe a ga-ezere. Ma, echere m na izere ga-esiwanyewanye ike dịka atụmatụ. Anyị, dị ka obodo, nwere ike idozi nsogbu ndị a ma ọ bụrụ na anyị etinyere ma jiri ha na-emepụta ihe na mgbalị anyị na-etinye na nsogbu nchọpụta ndị ọzọ.